LinkedIn waxay ku xisaabtami kartaa suuq yar oo isticmaalaya marka la barbar dhigo Facebook iyo Twitter, laakiin lambarradu weli way ku habboon yihiin bloggers iyo maareeyayaasha warbaahinta, gaar ahaan haddii niša ama warshadu tahay B2B. Pažymėtina, kad „Statista“, „LinkedIn“ yra 450 milijonų vartotojų, o tai yra 2016 m. Rugpjūčio 2 d., Aš vėl pradėjau.
„Tirada xubnaha LinkedIn“ laga bilaabo 2009 m. I ketv. 2016 m. III ketvirtis (malaayiin)
Tirooyinka ka sokow, inkasta oo ay tahay, bulshada ayaa tirinaysa. Iskuxirka ‘InteedIn’ wuxuu ka badan yahay CV-ka tooska ah ee internetka iyo hodantinimada kooxaha adeegsadaha, astaamaha farriinta iyo madbacadda daabacaadda Pulso waxay ka dhigeysaa fursad suuq-geyn weyn.
2.1 „Isticmaalka InMail“
3 3. Laga soo bilaabo LinkedIn pulsas
3.1 „Sababta Daabacaadda Diidmada Daran waa Muhiim“
4 4. Sverto diskusijų grupė
6 6. Svertas Kitas 4 Meelaha ugu muhiimsan ee Mawduucyada
6.0.2 2. Nuorodos nuorodos
6.1.1 4. „Isdhex galka Sawirka“
6.2 Maxay Muhiim Tahay filme „La Sameeyo Muuqaal“
8 8. Raadi Talooyin („Qancin“)
11 BONUSAS 1 – „Ku xayeysii LinkedIn“
12 BONUSAS Nr. 2 – „Istaraatiijiyooyin LinkedIn ah“
12.2 „Fariimaha“ taikinys: „Istaraatijiyad Tallaabo-tallaabo ah“
„Sida Sean Martin“, jei norite, kad „talo-bixinta“ būtų „talo-bixinta“, „wuxuu leeyahay“:
LinkedIn waa goob weyn oo dainų kobciyo qaybaha aad ka kooban tahay oo ka kooban dhagaystayaal la xiriira. Waxay sidoo kale ku fiican tahay xayeysiinta adeegyadaaga sababtoo ah awooda ay u leedahay inay beegsato danaha, demografiga, iyo qaybaha shaqada.
„Waxaad dooneysaa inaad ka faa iideysato awoodaha bartilmaameedka ah ee LinkedIn“, „sidoo kale aad u wanaajiso xayeysiulatesda si aad u soo saarto nooca taraafikada aad raadineyso“.
Tani waa isku kalsooni wanaagsan oo ah LinkedIn la isku dayo, laakiin Oren Greenberg, markhaatiyaal dhijitaal ah iyo agaasime maamul Kurve.co.uk, wuxuu ku darayaa xoogaa macquul ah. Waxa uu eegayaa in [ka dib] dhammaan ololaha imtixaannada ay nagu hayaan annaga iyo hay’ado kale oo dijital ah, natiijooyinka ayaa si aad ah isku mid ah u ah guddiga – LinkedIn ayaa xawileysa iibka ugu badan ee B2B iyo hog aad u sarreeya. "
Sidoo kale, sida laga soo xigtay Greenberg, LinkedIn ayaa si fiican u soo bandhigay, natiijooyin wanaagsan oo la siiyey marka la barbardhigo Dhexdhexaadinta iyo Blogging (haddii aad horay u haysatid daawadayaashabaabahasaabaašahasaabahasaabahasaabahasaabahasaabaabao, boggan) maqaalkaagu uu yahay mid la wadaagayo, arko martiqaadkaaga korriinka iyo xitaa saamiyada ay ku leeyihiin waddooyinka kale. "
„Astaamaha aasaasiga ah waxay ka shaqeeyaan LinkedIn“ yra tokia pati, kaip ir vyro vyras, kasta oo, kale ee warbaahinta bulshada – „va, inaad waqti ku qaadato LinkedIn si aad u dhisto joogitaan“. Oi, inaad udiyaarisaa isku xirnaanta si aad ugu dambeynta u sameyso shabakad ku saabsan magacaaga iyo ganacsigaaga.
Waxaan qoray a hagaha aasaaska suuqyada suuq-geynta suuqa ee 2014 in laga yaabo inaad rabto inaad wax akhrido si aad u bilowdo, waxaanan soo jeedinayaa inaad sidoo kale fiiriso boostada KeriLynn ee ku taal Siday siya si.
Isticmaal khibraddaada si aad u caawiso meel kasta oo aragto baahi
Bendrasis mokesčių mokėtojas: „xaqiiqda ah“ „LinkedIn“ programoje yra susijęs su xiriirro xirfadeed ma u oggolaanayo dadka isticmaala inay ka fikiraan madal inay yihiin guddi khayaamo, nasiib darrose LinkedIn Wali uma muuqato inay leeyihida shayaasad xoog.
Sidaas, ta pati waayo-aragnimo weyn oo ku saabsan LinkedIn aad, oo aad u xulasho badan oo ah xiriirada aad codsato ama aqbasho.
Alayna Frankenberry, maareeyaha istaraatiijiga ah ee loogu talagalay Eeg EE BlueSky, waxay soo jeedinaysaa far siyaabood oo aad ku dhisi kartid joogitaanka LinkedIn oo aad adigu naftaada u samayso mid ka mid ah dadka aadka u dhexeysa ee ej jira
1. „Dhis jiritaankaaga hortiisa macaamiishaada.
Way fududahay in dadku dhagaystaan ​​khabiir dhinaca warshadaha ah halkii laga dhigi lahaa inay ku hawl galaan koonto shirkad aan wajiyo lahayn, ayuu yidhi Frankenberry. "Haddii aad naftaada ir moodeyso inaad tahay hogaamiyaha fikirka ee warshadahaaga, hogaamiyaasha kale iyo go’aan sameeyeyaasha ayaa ogaan doona – waxayna aad ugu dhowdahay inay baaraan shirkaddaadaa, macaamiishayo."
Frankenberry wuxuu intaa ku daray inaad wali la wadato qoraallada oo aad si joogto ah u cusbooneysiiso koontadaada sumadda, laakiin waa inaadan hilmaamin astaamahaaga habraaca.
Jadwal u samee daqiiqadaha 20 galių kasta si aad u hubiso ogeysiiskaaga kuu gaarka ah ee loo yaqaan „LinkedIn ogeysiisyada“ oo aad la falgasho dhajinta ku qoran quudinnanda. Egas waxa ka dhacaya bulshadaada oo booqo dhowr xog-urursi oo ka socda kuwa kale ee ka shaqeeya wershadahaaga. . “
Frankenberry wuxuu kugu dhiirigelinayaa inaad „ku taageerto asxaabtaada xirfadaha halka ay ku fiican yihiin“, iyo inaad „u qorto talooyinka shaqaalahaaga, macaamiishaada iyo maareeyayaashaada, iyadoo aan vax lagaa. Tani kaliya kuma heli doontid qaar ka mid ah dammaanadaha isku mid ah “,„ laakiin sidoo kale waxay hagaajin doontaa jiritaankaaga xiriiriyahaaga “waxayna kuu arklys doontaa booqashooyin badan oo aad ku tagto astaantaada iyo dhajinta boga.
Dadka intiisa badani waxay isticmaalaan ‘LinkedIn’ sababtoo ah waxay daneeyaan waxyaabaha ay ka midka yihiin horumarinta xirfadda iyo kobaca ganacsiga. La wadaag waraaqaha bixiya xalka dhibaatooyinka ganacsiga guud iyo talooyin vaškas ku ool ah oo ku saabsan sida loo gaaro yoolalka. "Frankenberry waxay ku xasuusineysaa inaad" diiradda saarto xalalka halkii aad iskaa u dallacsiin laheyd, "markaa waxaad arki doontaa isticmaaleyaasha" oo taip laaban doona mar labaad si tai ula falgalaan adiga iyo wadaag waraaqahaaga. “
Isticmaal nidaamka isgaadhsiinta iyo isgaadhsiinta Isgaadhsiinta LinkedIn waxay ku siinaysaa isku-xidhka shakhsiyadeed ee xiriiriyeyaashaada ka hor inta aanad soo wacin si aad ula xiriirto dadka kale ee ku jira naktijamaa inMail hadi nayiyai nakei nakei nakei nakei nakei naakei naakei. ka hooseeya tab taabashada).
Farriinta (iyo sheekada, tan iyo markii la isku daray 2015) isla markiiba ka dib abuurista xiriirka – iyo muujinta dareen dhab ah iyaga iyo waxa ay qabtaan – waxay sidoo kale gacan ka geysan Kartaa abuurista xiriirka koowaad Iyo Kicinta.
Waa muhiim inaadan dirin vaškas farriin ahmiyada-u eg-ah wajiga hore, wajigaan xasaasiga ah. Ka fiirso arrimaha aadanaha:
Fursad aad ku hormarineyso shaqadaada ayaa si dabiici ah u imanaysa iyadoo qofka kale uu uu xiiseynayo adiga.
Carole Lieberman, MD, wuxuu sharraxayaa muhiimada abuuritaanka xiriirka ku saabsan diridanka farriinta gudbinta iyo khatarta aad ku maamulayso adiga oo iska indha-tiraya qodobada aadanaha:
Markaad [weydiisid] inaad la xidhiidho qof, ha sameynin haddii ujeedadaada gaarka ah ay tahay inaad isku daydo inaad ka faa’iidaysato xidhiidhkooda si kor loogu qaado vaškas. Marka qof uu sidan iigu sameeyo, waan la xidhaa iyaga.
„LinkedIn“ yra labai populiarus, kad jums būtų lengviau, kaip jūs, shirkadaha ka ganacsadaan danaha. Waa goob lagu dhiso xiriirro, taas oo aakhirkii isu rogi doonta fursado wanaagsan oo labada dhinacba ah.
Ericas Brantneris, oo, „Scribblr.com“, „waxay ka talo bixineysaa inaay quureynin wax ku oolka ah aaladda isgaarsiinta ee“ LinkedIn ’ee isgaarsiinta qaddarinta lacageed („ InMail “), gaar ahaan tinklaraštininkas iyo wacyigelinta isgaarsiinta.
Furaha ayaa ah in la hubiyo inaad leedahay qeeyb yar, oo si fiican loo dhisay. Waxaad sidoo kale ir baahan tahay inaad hubiso bartilmaameedku yahay dhagaystayaasha saxda ah ee garoonkaaga.
„Waxaan u maleynayaa“ „InMail“ dhab ahaantii uu yeelan karo qiime sare oo jawaab celin ah marka loo eego emailka qabow, maaddaama sanduuqyada emaylka ee blogger-ka ay badanaa ka buuxaan spam. Ka baxda dariiqaaga si aad ir ugaadhsato astaanta ‘LinkedIn’ oo aad u dirto emayl ayaa loo arki karaa inay socdaan mayl dheeri ah.
3. Laga soo bilaabo LinkedIn pulsas
„Qalabka daabicida ee LinkedIn“ („Pulsas“) ayaa kaa caawin kara inaad dhisto awoodaada haddii aad soo saarto waxyaabaha shabakadaadu rabto (iyo baahiyo) inay aragto.
Tusaale ahaan, fiiri sawir gacmeedka iyo milkiilaha ganacsiga Ed Gandia booseda hoose:
Gandia wuxuu ir adeegsaday madal si uu u kobciyo bartiisa, dabcan, laakiin wuxuu ku sameeyay isagoo daabacay boggag tayo leh oo kahadlaya baraha bulshada ee bartilmaameedka bartilmaameedka.
Marka, waxaad arkaysaa, maadada ‘Pulse’ awoodi karto inay noqoto mid laga xishoodo inay waxtar noqoto.
Si kale haddii loo dhigo, waxaad rabtaa inaad u tagto boostada Pulse sida aad u fiican sida dienoraščio įrašai – wax yar oo yar, malaha.
„Sean Hall“, milžiniškas „TekBoost“, „wuxuu ku raacsan yahay in“ "„bxga bogga internetka ee LinkedIn uu yahay istaraatijiyad aad u wanaagsan oo lagu helo soo-bandhigid dhagaystayaal cusub, iyada oo la adeegsanayo shabakadaada hadda jira," Iyo in "ujeedadu tahay la bixiyo waxyaabaha la wadaagi karo."
Waxaad rabtaa inaad daabacdo "vaškas nėra reikalingas taageerayaashaadu, tai yra dhab ah u xiiseynayaan inay arkaan, oo tai fekerayaan inay la wadaagaan taageerayaashooda. Natiijadu waa soo-gaarsiinta kor u qaadka, gaar ahaan marka gabalas-soo-rog uu ku dhaco fayras. "
„Sababta Daabacaadda Diidmada Daran waa Muhiim“
Teajai Kimsey, agaaimaha suuqgeynta kristalų struktūros įstiklinimas, vaškinių ir minkštųjų spalvų gavimas ir palaikymas LinkedIn uu yahay mid ku hawlan.
Kuma filna lagu qoro astaan ​​qoran oo qoraal ah iyo khadka tooska ah. Waa inaad ku dhejisaa waxyaabo si joogto ah u hawl gala dadka adiga kugu xidhan; Waxyaabaha ka baxsan waxyaabaha caadiga ah laakiin maskaxda ka haysta ganacsi. Markii aan dhajiyo waxyaabo wanaagsan, waxaan arkaa tėtis badan oo eegaya macluumaadkeyga, oo codsanaya xiriiriyaal iyo wixii la ah, oo faallo ka bixinaya wixii aan halkaas ku dhigay.
Ka qayb qaadashadu waa meesha dadaal kasta oo aad horay ir taip gudbisay LinkedIn, oo puls waa meel aad u fiican oo aad ku sameyso.
Si ka duwan kooxo kooxeed iyo faallooyin, waxaad ku kori kartaa hay’ad ku taal naftaada markaad billowdo daabacaadda maqaallo soo jiidasho leh oo cunto u fekeraya magacyada waaweyn iyo kuwa yaryar ee bulshadaada a LinkedIn, iyo dad.
Maskaxda ku šienas boostadaada Pulse ay taha inay jiraan and kor loogu qaado waxyaabaha ku kooban bartaada, kaliya maahan inaad la wadaagto aqoonta warshadaha bulshada LinkedIn. Tani Waa muhiim sababta oo Ah waxaad dooneysaa inaad Sare U qaaddo hawlgelinta labadaada muuqaal Iyo Bloggaaga, Keli Kuma ahan Labada vidurio midkood, Marka waxaad dooneysaa inaad Ku dhajiso kaliya waxyaabaha KU habboon waxa AAD horey U sameysay oo AAD vaškas KU qorto bartaada.
Kristina Viola, „TheMLS.com“, kurios žinios apie šią dieną yra: "[Waxaa jiray] kor u kaca codsiyada markii aan ku xirannay boggayaga asalka ah ee asalka ah iyo waliba maqaallo ku saabsan CEO-ka ayaa laga soo xigtay. Hal maqaal ah oo aan soo dhajinay (agaasimaha ayaa laga soo xigtay) ayaa ka helay aragtiyo ka badan 1,200. Tan iyo markii aan nahay nidaamka MLS, waxaan mar walba isku daynaa inaan dirno waxyaabaha ku saabsan mulkiilaha munaasibka ah kaas oo ku saabsan dhagaystayaasheena. "
4. Sverto diskusijų grupė
„Waxaa laga yaabaa inay u muuqato in ay u muuqato in ay ku celiso halkan, laakiin ka faa’iideysii kooxaha wada-hadalka ee LinkedIn, mahaha oo kaliya inaad bilowdo adiga keligaa, laakiin adoo ka jawaabaya xeeladaha ee ji“.
Henrikas Butleris, kalbėdamas apie „CanIRank“, taip pat kalbėk apie tai, kaip reikia, o ne kaip „qaybqaadatid“, o ne „xxxir“, o ne „LinkedIn“. „Kuwaas oo“ yra taraafikada į beegsanayo profilį, kurį galite pamatyti tinklaraštyje:
Mid ka mid ah faa’iidada LinkedIn ee ka jirta kanaalada kale ee warbaahinta bulshada waxaad ka heli kartaa taraafikada bartilmaameed dheeraad ah adoo ku biiraya iyo kor u qaadaya macluumaadkaaga kooxaha bulshada ee la xiriira warshadahaa. Tani waxay mėnesį ogolaaneysaa inaad magaca shirkadaada ku horayso dadka ir muuqda in xiiseynayaan badeecada ama adeegga aad bixiso.
„Iyadoo LinkedIn“ laga saarayo tabinta Gudbinta ee kooxaha, hadda waa ay ka sii muhiimsan tahay inaad aado halka the dhageystayaashaadu joogaan ayna ka fogaadaan is-kor u qaadida ilaa aad adigu magac u sameysay.
Julie Graff, xiriiriyaha arrimaha bulshada Suuqa Soodejinta, waxay kugula talinaysaa inaad "hesho oo ku biirto Kooxaha soo jiitay dhageystayaashaada bartilmaameedsan" aš "si firfircoon ula shaqeeya, ka jawaab su’aalaha soo bandhigay iyo bixinta macluumaad vaškas ku ool ah wadahadalka."
Waxaad sidoo kale (si taxadar leh) uugu soo diri kartaa xiriirinta waxyaabaha aad ubaahantahay, haddii ayyy mid qiimo badan u leh kooxda oo aaney is-tarin. Isticmaalida kooxahaan sidan waxay gacan ka geysan kartaa dhisida wacyi-gelinta, udub dhexaad u tahay, iyo kaa caawiso inaad dhisid xiriiro dhab ah oo lala yeesho xubno ka mid ah dadka dhageystayaasha ah.
Fikradda kale waa in the biir kooxaha kooxaha xayeysiinta halkaas oo xubnaha oo dhami in the joogaan inay gacan ka geystaan ​​horumarinta midba midka cale shaqadiisa. Puslapis „Mastermind Group“ reklamos tinklaraštis turėjo „LinkedIn“, o tinklalapyje jau yra žinia apie tai, ar jis yra gerai žinomas..
Wadahadal kooxeed waxay faa’iido u tahay kor u qaadida shabakadaada. „Sida Doug McIsaac“, oi, jei norite, kad burnos ir žandikaulių sąjunga būtų „TheLinkedCoach.com“, „faallooyin“, "Qodno muhiim ah – marka qof uu ka raadiyo LinkedIn, waxay arkayaan natiijooyinka shabakaddooda marka hore. Haddii aad rabto inaad soo bandhigto raadin dheeraad ah, waxaad u baahan tahay inaad ka shaqeyso koritaanka shabakadaada. Tani waa mid aad muhiimsan haddii aad hayso xalka dadka raadinaya warshado gaar ah. "
Sean Hall, vaguay talineysaa inay ir firfircoon, qeyb gasho fadhiyada la xiriira Q&A-da warshado ahaan „hab xoog leh oo lagu dhiso xiriiryo adag isla markaana khibradahaaga warshadaha lagu soo bandhigo. Furaha ayaa ah in la hubiyo in aad ku darsato qiimaha wadahadalka, oo kaliya in aan si cad u aflagaadeyn shirkaddaada ama alaabadaada.
Si aad u soo koobto, waxaad abuurtaa doodo ku habboon naftaada oo ku lug leh bulshada, taabashada mawduucyada iyo xaglaha ku xiran tiirarkaaga blogga ama farriinta ganacsiga iyo turinys.
Waxaad rabtaa inaad si sax ah uga feejignaato dadka saxda ah oo tadao sawir gaar ah oo naftaada ah, waxaad samaynayso iyo waxa kuu qabanaya.
Doug McIsaac wuxuu kugula talinayaa samaynta cinwaankaaga ” vaškas ka dheh wax soo saarka ama adeegga aad soo gudbiso. ‘Waxaan ka caawiyaa macaamiishayda ku habboon inay gaaraan natiijooyinkooda ku habboon’ ama ‘waxaan u soo bandhigo natiijooyin ku habboon macaamiishayda ku habboon’.
„Cinwaankaaga sidoo kale wuxuu noqon karaa mid ka badan oo tan: Neil Patel isticmaalaa“ „Crazy Egg“ įkūrėjas & Sveiki, baras ‘oo waxaan doortay’ Į rezultatus orientuotas laisvai samdomų vertėjų tinklaraštininkas, rašytojas, karikatūristas ‘naftayda’.
Waxa muhimka ah waa „inaadan ka dhigin inaad aad ugu egtahay meel tuug ah“, ayuu yiri khabiir ku xeel-dheer suuq-geynta Chelsea Hewitt. Xaqiiqda Caalamiga ah ee aan xadidneyn ee Sotheby. "Qoraalku waa inuu lahaadaa xoogaa vaškas lagu qurxiyo [booqdayaasha] gujinaya oo ka dhigaysa inay xiiseeyaan ku soo noqoshada boggaaga ama boggaaga mustaqbalka."
Si kooban, „McIsaac wuxuu cadeynayaa“:
Waxaad i haysaa. 🙂
„Sida aniga oo“ kopūstai, „Sarah Boutwell Geek Powered Studios“, jei norite sužinoti daugiau apie tai, ką reikia padaryti,.
Waxay kaa dhigaysaa mid aad cod badan ku yeesho aadanaha iyo sida aad dhab ahaan uga dhigtay fikir iyo dadaal inaad ku qorto astaantaada. Astaantaada kaliya maahan atnaujinti, waxay u badantahay aragtida shaqsiyeed ee aad tahay xirfadle. Ha ilaawin inaad kudarto waxa kaa dhigaya qof weyn oo shaqeeya la, ma ahan oo keliya waayo,.
Ugu dambeyntii, sida shakhsi ahaaneed ee kooban ee aad soo koobi doonto adiga kugu habboon, laakiin xusuusnow tani waa qalab iibin oo aan ahayn waraaqo.
6. Svertas Kitas 4 Meelaha ugu muhiimsan ee Mawduucyada
Vidurio kasta oo ka viduryje ah goobahaasi wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku darto macluumaad gaar ah profile-gaaga oo kaa caawin doona inaad soo jiidato jidka toosan.
Dareenka koowaad ee tirinta, marka marka aad ku dhejiso sawirkaaga sawirka, hubso in tani ay taha mid saaxiibtinimo, nadiif ah oo xirfad leh.
"Xiriirka ugu weyn ee LinkedIn waa sannadihii 30-50," ayuu yiri Hewitt. "Kooxdan da’da ah waxay inta badan ku noolyihiin shaqsiyaadka leh dhaqdhaqaaqyo isdaba-joog ah oo ku saabsan shaqada, dhaqdhaqaaqyada bulshada, dhacdooyinka qoyska iyo vax ka badan! Fure u ah helitaanka dareenka inta lagu jiro boodh gaaban oo o ku saabsan feedhadeeda LinkedIn waa in the helo sawir cajiib ah oo la socota cinwaanka gaaban laakiin xiiso leh taas oo ka dhigi doonta inay joojiyaan oo vaškas badan bartaan. "
Taas macneheedu waa sawirkaaga sawirku waa inuu si fiican u shaqeeyo cinwaankaaga oo u eeg sida ugu fudud ee suurtagal ah natiijooyinka wanaagsan.
2. Nuorodos nuorodos
Muuji joornaaladaada kaip „fiican ee“ tinklaraštis, „boostada martida iyo ebooks“ lacag la’aan ah sida daabacaadda ku saabsan xiriirka LinkedIn.
Shaashadda kor ku xusan waxay muujineysaa sida aan kuugu darey sawiradaada loogu talagalay Machadyada kūrybinio rašymo institutas ee khibradda shaqada ee la xidhiidha qaybta "tęsti" qaybtayda.
Waxaad faylasha faylasha ir gudbin kartaa qaybtaada kooban, khibradaha iyo qaybaha waxbarashada. Kuwani waa kumbiyuutarradaada, caddaynta koowaad ee khibradaada iyo khibradaada.
4. „Isdhex galka Sawirka“
Tan iyo markii LinkedIn uu xayeysiisay SlideShare ee 2012, bogga si sahlan ayaa looga heli karaa shabakadda bulshada, si fudud ayaad kuugu soo dari kartaa bogaggaaga iyo bandhigyadaada si aad u hesho qof walba si aad u akhrido.
Maxay Muhiim Tahay filme „La Sameeyo Muuqaal“
„LinkedIn waxay leedahay muuqaalo badan oo dheeraad ah oo xor u ah inaad ku darto boggaaga ama astaantaada hadda. Waa ceeb haddii aadan ka faa’iideysan iyaga.
„Boutwell waxay si gaar ah kuugula talineysaa inaad isticmaasho SlideShare“, „vėl pradėkite mėnesį, o po to, kai gausite„ xog-is-weydaarsi macluumaad ah “.“ Ka eeg qaanuunka # 6 wixii talo bixin ah haddii aadan mar hore aqrin.
Ugu dambeyntii, waxaad ku dari kartaa muuqaalada Xiriirka xirfadeed ee LinkedIn, "Kaas oo mėnuo olanayaya inaad abaabushid oo aad naqshadayso dhammaan waxyaalihii muuqaalka iyo isdhexgalkaaga."
„Markaad codsato xiriir cusub“, „LinkedIn waxay kuu ogolaaneysaa inaad fariin fariin yar oo fariin“:
Istymaalayaal badan ayaa inta badan iska indhatira astaantan, waxayna ku xadinami inay adeegsadaan farriinta xayeysiiska ah ee „LinkedIn googgeeyaha“ – Waxaan jeclaan lahaa inaan kugu soo daro shabakaddayda mihnadlaabahakuaūūūūūūūūūūūūūūūūūūūūūūūūūūūūūūūūūūūūūūūūūūūūūūūūūūšūūš â Lin Lin Lin Lin Lin Linbakbakbakbakbakbakbakbakbakbakbakbakbakbakbakbakbakbakbakbakbakbakbakbakbakbakbakbakbakbakbakbakbakbakbak daro cajiib badan oo xoog badan. si loo dhiso aaminaad iyo aaminaad.
Farriinta intro warsa inaad in shead and sheigto xiriiriyahaaga inaad ogtahay cidda aad tahay, waxa aad qabatid iyo waxa aad ka dhigtay inaad la xiriirto – dhammaantood ka yar jilayaasha 300.
Sveiki! Luana Spinetti halkaan. Waxaan ahay blogger fadhigiisu yahay talyaaniga oo si xariifnimo leh u jecel robotai, sidaada oo kale. Waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo ka hadalka waxyaabaha xiisaha leh ee aan wadaagno! Ma jeclaan lahayd inaad ku xidho?
8. Raadi Talooyin („Qancin“)
Alexa Kurtz, interneto svetainių teikėjų nuomonė, kad jūs esate žinomas kaip žiniatinklio svetainė, jei jūs esate tikri, ar jūs turite „waxa lagama maarmaanka u ah ganacsiga“:
Ar Haddii aad dalban lahayd shey internetka ah oo ar taip bandhigaan laba shirkadood, sideed u go’aansan laheyd shirkadda aad ka iibsaneyso? Laga yaabee inaad isbarbar dhig ku sameyso qiimaha shirkadda A iyo kan kale sida shirkad waliba ula dhaqanto shaqaalahooda, laakiin waxaad u badan tahay inaad raadineyso dib u eegista khadka tooska ah ama saaxiibadaada weydii.
„Kurtz ayaa sheegay in sidan oo“, kaip „LinkedIn“ profilis:
Habka ugu fiican ee tan loo samaynaayo waa in we wedidiisto macaamiisha hore, shaqaalaha iyo barahaaga martidaada oo lagugu soo dhajiyay ama aad la shaqeysey si aad ugula taliso LinkedIn.
Si kastaba ha noqotee, talooyinka ayaa kaliya shaqeeya haddii ay run yihiin (haa, qof ayaa dhab ahaantii tagi kara oo hubi haddii waxa la sheegayo ay run tahay!). Iyada oo maskaxda lagu hayo, ayaan mar kaliya u soo bandhigay sawirkayga bilaashka ah shabakaddayda iyada oo lagu beddelayo talooyin daacad ah oo loogu talagalay shaqada la qabtay ama akhristayaasha faraxsan ee akhristayaasheeda.
Natiijada? Waxaan lahaa jawaabo wanaagsan oo ka helay talooyinka ugu sareeya ee akhristayaasha faraxsan, iyo mid ka mid ah joornaalada kale ee dhabta ah waxay dhab ahaantii sheegteen iyada oo bilaash ah (waxaad arki kartaa halkan).
Waxaad isticmaali kartaa @therions ee komentarai iyo siūlai, iyo waxay heli doonaa shabakadaada la ogeysiiyey oo ku lug leh turinys aad u dadaal badan, sida on Twitter.
„Sidee ayaa loo shaqeeyaa LinkedIn“
Markii la daabacay, ma u adeegsan kartid vaškas ku saabsan qoraallada ‘Pulse’, laakiin runti waad faallo ka bixin kartaa boostadaada oo waxaad ku dari kartaa halkaas meesha ‘wac’ ilaha aad soo xigatay qoraalka.
Waxaad sidoo kopūstai KA Qori kartaa cusboonaysiinta boodhadhkaaga “LinkedIn” Dashboard “waxayna yihiin hab waxtar Leh oo Lagu helo indhaha dadka waxa Ku JIRA, Isla markaana Lagu abaal mariyo taraafikada, faallooyinka Iyo waxyaabaha La jecel yahay, maadaama AY U shaqeeyaan Nariams Isku-dhafka Facebook” Iyo „Twitter“.
Sean Hall wuxuu ir fidiyaa faa iidada xitaa xisaabaadka shaqaalaha, haddii aad shaqaale leedahay. "Hubso in shaqaalahaagu a si si joogto ah ugu dhajin karaan waxyaabaha laxiriira wershadaha akoonkooda shaqsiyadeed, kuwaas oo kuxiran bogga shirkaddaada," ayuu yiri. "Waa inay sidoo kale la wadaagaan cusboonaysiinta kuwa raacsan si ay u kordhiyaan gaaritaanka iyo hawlgelinta."
Bogagga shirkadu maaha kuwo ka muhiimsan profile-kaaga. Waagii hore, waxaan and maleynayay inay ahaayeen iyo waxaan boogaadinayey in badan oo ka lumay taraafikada iyo ka-qaybgalka baqashadayda.
Aad ayey muhiim u tahay in loo dhiso joogitaanka khadka internetka ee ganacsigaaga ama blog-gaaga iyo bogagga shirkaduhu waa aalad bilaash ah oo weyn oo aad ku kasban žemėlapis taageerayaashaada iyo dadka ku dhaqanaga ama warshadahaaga ooa barta lagarda bagaris kali maahan naftaada. (Adeegso talooyinka ir aad hawsha u fududeyso! Eeg Xeerka # 9.)
„Sida Sean Hall u dhigo“:
Asa haysato pelke nusiskuto vaško mėnesio ogolaaneysaa inaad la shaqeysid taageerayaashaada, wadaagno fursadaha shaqo ee dideogalka ah, iyo inaad noqoto mid lagu kalsoonaado bulshada dhexdeeda. „Waxa kale oo“ yra „noqon“ kartaa goob „kale“ oo aad ku wadaagtid vaškas kasta oo cusub oo aad sii deyneyso waana hab weyn oo aad kuugu soo celin karto boggaga internetka. „LinkedIn“ „Waxay“, „Kava Kaina“, „Kata Inaad Ka Takhalusto Tartamayaashaada“, „Halka Sidoo Kale“. Kala Kaawinaya Inaad Iska Hubiso „Vaškas“ yra „Tartankaagu“.
Xaqiiqdii, ka faa’iideysiga kanaalka kaniisadan – oo sidoo kale la yimaada baaritaankeeda u gaar ah si loo kormeero sida waxtarkaagu uugu cusboonaado – waxay ka faa’iideysan kartaa istiraatiijiyada suuqgeynta LinkedIn.
Si kastaba hahaatee, Swapnil Bhagwat, oo gerai žinomas kaip „Orchestrate Technologies, LLC“, „wuxuu ka digayaa“ "„haysashada bogeeda“ shirkadda „LinkedIn“ jūs, kai dhajinta „waxyaabaha ku saabsan sida iyo marka aad jeceshahay inaysan ku wadi karin ka qaybqaadashada la rabo“. „Caqabada ah in la qabsado“ [Fiiro gaar ah] „isticmaalka LinkedIn waa mid aad u kacsan, iyo in aad hesho muuqaalkaaga muuqaalka u baahan yahay dadaal dheeraad ah. "
Intaasi kuma filna, in la haysto pelkė nusiskuto. Waa inaad sii noolaataa oo aad haraysaa si aad uga qaybgasho dhagaystayaashaada oo aad uga faa iideysato. Sidese? Bhagwat wuxuu soo jeedinayaa:
Jei norite, kad „LinkedIn“ atsiųstų naujienų sąrašą, jūsų „bulshada sida“ buferis yra „HootSuite“. Sidoo kopūstai, [waxaad ku gaari kartaa] qaybo kala duwan [oo leh] Xulashada Taikymas, atnaujinantys uogų ir širkadaha inay bartilmaameedsadaan dhagaystayaal gaar ah – oo ku saleysan naafanimada iyo shaandhooyin kalebo – oo leh vaja.
Kelvinas Jiangas, CFA, „Buyside Focus“, esantis „LinkedIn“, yra žinomas kaip „suuked geyso meheraddiisa oo“, kuris yra jūsų mėgstamiausias pasirinkimas. Tilmaanta Jiang waa "in la cusbooneysiyo shirkaddaada oo la taabto oo la beddelo."
Ka fekeris padavė xidhiidha dhegeystayaashaada oo ku dheji kara xiriirro tayo sare leh bogga shirkaddaada. Tani waxay ku jiri doontaa akhristayaasha blogka ee ku habboon, sawirada, fiidiyowyada, iyo jadwalka wareega ee shabakadaada internetka. Dadka raacsani waxay arki doonaan xiriirinta mawduucaaga si toos ah bogooda hore ee LinkedIn, taas oo keenta isbedel sare. Tani waa hab weyn oo lagu gaari karo gaadiidka shabakadaada iyo soo jiidashada taageerayaal dheeraad ah bogga shirkaddaada.
Dhanka cusboonaysiinta, Sarah Boutwell waxay kugula talineysaa inaad ilaaliso „joogteyn ku dhajinta boggaaga ganacsiga. Haddii khibradeyda maareeyaha warbaahinta bulshada a bartay wax walba, waa in waqtiga iyo joogtayntu ay yihiin labo ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee maskaxda lagu hayo markii la isticmaalayo baraha bulshada.
LinkedIn waa jawi xirfad badan oo hubaal ah, laakiin taasi micnaheedu maahan inaadan noqon karin bulsho isla markaana aad u tagtid xubnaha shabakadaada haddii aad u maleyneyso in wax aad soo dhejiso ay iyaga khusayso. Ar dhajinta badanaa turėjo jūsų vestuvinį vašką ir fiyan ka qeybqaadashada iyo sumaddaada halkaas uga lagaaga helo. Si kastaba ha noqotee, ha ku buufin qof kasta. Hubso inaad ku daro noocyo kala duwan, sida ku darista sawir ama soo bandhigida SlideShare markasta iyo ka dib.
„Qeybta ugu hooseysa ee bogagga shirkadda LinkedIn“, Sida Jiang ayaa dhigeysa, va:
BONUSAS 1 – „Ku xayeysii LinkedIn“
Haddii aadan waqti iyo maal aad u badan ir qoondeyn karin suuq-geynta gudaha, waxaad turėjau jūreivį ku xayeysiin kartaa LinkedIn.
Seanas Martinas wuxuu kugula talinayaa inaad „hagaajiso ololehaaga aad beegsatay [oo aad] iskuday inaad geliso liiete liistaa liiska ama cinwaanka emaylka ee LinkedIn, sidaa darteed waad yareyn kartaa dhagaystayaashaada xayeysiinta. Kadib waxaad isticmaali kartaa LinkedIn si aad ugu dirto xayeysiimaha tooska ah ee aargoosi u ah isticmaaleyaashan sidoo kale waxaad u abuuri kartaa dhagaystayaal la ah ah aad ugu badiso tirakoobka dadka isticmaala ee aad uee soo. Waa nooc ka mid ah cuntada loo isticmaalo soo celinta guulihii hore ee jiilka hoggaaminta. “
„Waxaad sidoo“ kopūstai "isticmaali kartaa pranešimus remiamus pranešimus oo ku xiran bogagga soo degsan halkii laga heli lahaa qaybo" iyo Martin wuxuu sharxayaa sida:
Badanaa, dadku waxay isticmaalaan kuwan xayeysiin ah oo lagu guuleysto si kor loogu qaado qaybahooda cusub. „Inkasta oo tani“ yra tau gerai žinomi, o daina „hormarin karo qaybaha cusub“, „waxaad isticmaali kartaa“ sicirka sarreeya iyada oo loo marayo qiimaha fursadaha ugu fiican. Tusaale ahaan, waxaad abuuri kartaa boggaga gaarka ah ee sooidanti, iyo isku xirnaanta kuwa xayeysiisyadaada la xayeysiinayo si ay u abuuraan dib-u-celin halkii aad ka heli lahayd hogaaminta. Waxaad dooneysaa inaad ka faaiidaysto gaadiidka ugu awoodda badan ee aad awoodi karto halka ugu muhiimsan tahay.
BONUSAS Nr. 2 – „Istaraatiijiyooyin LinkedIn ah“
Talooyin guud iyo talobixin ayaa kaliya qaadan kara oo keliya ilaa hadda, mana jirto vaškas lagu kalsoonaan karo oo ah xeelado faahfaahsan oo ka yimid khibradda maamulayaasha suuqgeynta.
„Carey Dodd“, „suuq-geynta“ „Sirenų grupė“, „Oyo Greenberg“, „Labadooduba waxay wadaageen istiraatiijiyad-tallaabo tallaabo tallaabo ah eeaga faa’iideysan karaan kuwa loo yaqaan„ LinkedIn “. Waxaad ka heli doontaa inta badan talooyinkii lagu siiyey xeerarkii hore, oo aji kujirto xoogaa aragti gaar ah oo ka soo baxday khibraddooda tooska ah.
Carey Dodd ayaa sheegtay į "fure u ah helitaanka maadadaada la ogaaday ay sii socoto nišoje", aš galiu atsigauti:
„Tusaale ahaan“, „taxanaha Siren Group“ – „Nafaqada Caymiska“, „Shirkadaha“ mados elektroninė komercija, kuriu jūsų „horumarinta ciyaaraha Bulshada“..
2. „Deji LinkedIn“ bogga vitrina kasta oo ka mid ah xaglahaaga
La wadaag warshadaha warshadaha ee la xidhiidha – turėjau tau džiaugsmą abuur sawir ah boosto kasta si loo helo ka qaybqaadasho wanaagsan.
Iyadoo la isticmaalayo miisaan yar, isticmaal Isticmaalka LinkedIn si aad ugu dallacdo boggagaaga blog-ka ku yaal bogga bandhigga (same dhagaystayaasha la beegsanayo natiijooyinka ugu fiican). Tani waxay kaa caawineysaa inaad kor u qaado taageerayaasha boggaaga.
4. „La daabaco maqaallo gaar ah“, „oo“, „maktabado ku shaqeeya LinkedIn Pulse“
"„Hubso inaad iyaga la wadaagto boggaaga bandhigga“.
5. „Fariin Twitter“ ah u dir @LinkedInPulse adigoo xiriirinaya maqaalka Pulse
Hubi in maqaalkaaga Pulse uu wadaagayo, uu jecel yahay, iyo dadka ka faaloonaya saacadaha ugu horeeya ee 48 ee daabacaadda (waydii asxaabta / qoyska / asxaabta). Tani waxay čia doontaa fursada weyn ee lagu helayo LinkedIn.
„Fariimaha“ taikinys: „Istaraatijiyad Tallaabo-tallaabo ah“
Istaraatiijiga labaad, Oren Greenberg, ayaa kugu hagaya adiga talaabo-tallaabo ah si aad u hesho dadyowga diirada and saaran LinkedIn oo qori boosto weyn oo loogu talogalay baahidooda:
2. Raadi bartilmaameedkaaga – waxaad ka heleysaa liiska dadka 50-100 ee aad rabto shabakadaada (Marka ugu horeysa ee aad u maleyneyso in ay tahay – aha a ha kuboon tahay, ma akhrin lahayd, waa macluumaad qiimo leh?).
3. U dir codsi shakhsiyeed si aad isugu xirto – u sheeg wax yar oo ku saabsan farriinta xidhiidhka: waxay u socotaa wadada dheer ee qofka kale haddii ay ku arkaan inaad wakhti la qaadatay iyaga. (Egas Qodobka # 2)
4. Jaantus saar 10-20 kuwaas oo si aad ah loola beegsan yahay oo ku habboon qodobka iyo, ka dib markaad hesho ugu yaraan 10 ee xiriiriyeyaasha cusub ee la beegsanayo ee shabakadaada, daabac boostada oo waliba qaybtaas la wadaag kooxahaas. Waxaad xitaa xitaa Wadi kartaa warsideeyaal KA sheekeynaya dhagaystayaasha AAD adigu kaliya daabacday maqaal, oo aadan Rabinas inaad vaškas iibisid – haddii AAD caddeyso qiimaha, dadku waxay Kuu Iman doonaan adiguna waxaad dhisi kartaa xiriir Iyo Laga yaabaa inaad kasbato macaamilka nolosha.
"Tani waxay umuuqataa inay tahay shaqo badanas," ayuu yidhi Greenberg, „laakiin natiijooyinku waxay u hadlaan naftooda – mararka qaar xitaa 5k + aragtiyo ku saabsan qodobbadaas iyo in ka badan saamiyada 100. waxaaga ‘- faallooyinka ayaa leh awood aad u badan marka ay ka muuqdaan quudinta dadka, isu imaatinka, iyo kobcinta aragtida.